लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य बालबालिकाको हेरचाह यसरी गरौँ - Health TV Online
लकडाउनले घरभित्रै बस्न बाध्य बालबालिकाको हेरचाह यसरी गरौँ
हेल्थ टिभी अनलाइन : कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वका धेरै देशसहित नेपाल पनि पुर्ण रुपमा लक डाउन भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले नेपाल लकडाउन गरेको हो । जसका कारण कलकारखाना, यातायात व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प प्राय छन्। सरकारले सबै नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । यतिखेर बालबालिकाका विद्यालय पनि बन्द छन् । बालबालिकाहरु घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन् । यसअघि हुने यस्ता लामो बिदामा बालबालिका आफन्तजनकोमा जाने, घुम्ने, रमाइलो गर्ने गर्थे तर अहिले घरको कोठामै बस्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसैले अभिभावकले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अभिभावकलाई कोराना संक्रमणको असर र जोखिमबारे थाहा भएपनि बालबालिकालाई यसबारे जानकारी नहुन सक्छ । लामोसमयसम्म घरमै कोठामै बन्देज भएर बस्दा बाल बालिकाहरुमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ त्यसैले अभिभावकहरु विशेष सचेत हुन जरुरी छ । यस्तो बेला अभिभावकको भूमिकाअझै महत्वपुर्ण हुन्छ ।
अभिभावकहरु यो बेला आत्तिनु हुँदैन । अभिभावक नै डराउँदा यसको असर बालबालिकालाई पर्न जान्छ । बालबालिकालाई हामी सुरक्षित छौँ भनेर आश्वस्त बनाउनुपर्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण हुने कारण र अपनाउनु पर्ने सावधानीहरुबारे उनीहरुलाई पनि राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ ।
अभिभावकहरु यो बेला आत्तिनु हुँदैन । अभिभावक नै डराउँदा यसको असर बालबालिकालाई पर्न जान्छ । बालबालिकालाई हामी सुरक्षित छौँ भनेर आश्वस्त बनाउनुपर्छ । उनीहरुमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्नु हुँदैन । उनीहरुलाई डर देखाउनु हुँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमण हुने कारण र अपनाउनु पर्ने सावधानीहरुबारे उनीहरुलाई पनि राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ ।
घरमा बस्दा के गर्ने ? के नगर्ने ?
१) अभिभावकहरुले अनावश्यक डर उत्पन्न हुने समाचार, भिडियो तथा अन्य नकारात्मक कुराहरु बच्चाहरुको अगाडी नगर्ने, नदेखाउने ।
२) बालबालिकाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने । माक्सको प्रयोग, सावुन पानीले हात धुने तरिका र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न सिकाउने ।
३) बालबालिकाको रुची अनुसारका क्रियाकलापहरु गराउने, गीत गाउने, नाचगान, कथाका कितावहरु, बालपत्रिका वा उनीहरुले मन पराउने पाठ्य सामाग्री दिने ।
४) रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बृद्धि गर्न खोनेकुरामा विशेष ध्यान दिने । झोलिलो खानेकुरा, दुध, अन्डा, फलफुल सँग गेडागुडीजस्ता खानेकुरा खुवाउने ।
५) यो समय मौसम परिवर्तनको पनि समय भएकोले मौसमी रुघाखोकी, ज्वरो आउन सक्छ । त्यसैले हरेक दिन तातो पानी, अदुवा, बेसार, तुलसीको पात जस्ता घरेलु सामग्री प्रयोग गरेर पानी खुवाउने ।
६) बालबालिकालाई कोराना संक्रमणको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरु देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरिहाल्ने ।
७) घरमा कसैलाई रुघाखोकी, ज्वरो आएको छ भने बच्चाहरुलाई उनीहरु नजिक नराख्ने । बच्चाहरुलाई घरबाहिर जानै नदिने, घरको छतहरुमा सावधानीपूर्वक डुलाउने, खेलाउने । विहानको घाममा बस्न लगाउने ।
८) मोबाइल वा ट्यावमा गेम मात्र खेल्न दिँदा बालबालिकालाई मोबाइलको लत बस्न सक्छ । उनीहरुलाई गेममा मात्र नभइ अन्य ज्ञानबर्धक सामाग्री हेर्न सिकाउने ।
९) घरका सवै परिवार बसेरसँगै टिभीमा भएका रमाइला र ज्ञानबर्धक तथा मनोरञ्जनका सामग्री हेर्ने ।
१०) बालबालिकाहरुलाई घरभित्रै उनीहरुले सक्ने कामहरु लगाउन सकिन्छ । उनीहरुको उमेर अनुसार घरका सामानहरु मिलाउने, सफासुग्घर गर्ने तथा अभिभावकको निगरानीमा पानी उमाल्न, चिया पकाउन, तरकारी केलाउन सिकाउन सकिन्छ । यसो गर्दा उनीहरुको समय सजिलै बित्छ र केही कुरा सिक्छन पनि ।